Rugby – «Gold Top 20»: tafita amin’ny manasa-dalana ny TFA | NewsMada
Rugby – «Gold Top 20»: tafita amin’ny manasa-dalana ny TFA
Par Taratra sur 03/12/2018
Manohy ny diany ho any amin’ny manasa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “Gold Top 20”, taranja rugby ny TFA Anatihazo (Pilo kely). Fihaonana, notanterahina teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, omaly alahady. Teo amin’ny lalao voalohany, resin’ny TFA, tamin’ny isa 20 no ho 15 ny XV Fa Andohatapenaka.
Nosahiranin’ny XV Fa ny Pilo kely vao nahazo fandresena, tamin’ity. Na izany aza, mbola nipetraka ny traikefa sy ny fahaiza-manaon’ireo mpilalaon’Anatihazo, izay efa zatra lalao goavana. Anisan’izany, ry Rasta sy Gaby kely ary ry Ginot sy Marsa, teo amin’ny fitsaram-baolina.
Nitondra ny lalaony tao anaty “avant” ny TFA izay nanatombo teo amin’ny haben’ny vatana. Nitarika an’isa hatrany ry zalahy, nahatonga baolina nentin-tanana indroa, teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, ka nahalasa ny isa ho 10 no ho 3. Tsy nahafaty afa-tsy “hors jeu” tokana kosa ny XV Fa.
Niezaka nanohitra ny XV Fa, teo amin’ny tapa-potoana faharoa ka nahatonga baolina nentin-tanana ihany koa, saingy tsy nitazam-potsiny koa ny TFA fa namono baolina hatrany. Mendrika ny lalao nasehon’ny XV Fa, izay nampiseho endri-dalao tsara sy ambony. Ekipa manana ny ho aviny tokoa atsy ho atsy ny XV Fa.
Teo amin’ny lalao faharoa, tsy tontosa hatramin’ny farany ny fihaonana teo amin’ny JSTA Ambondrona sy ny Cosfa. Noravain’ny mpitsara teo amin’ny fanatanterahana ny fanalavam-potoana mantsy ny fihaonana teo amin’ny roa tonta, noho ny hamaizinan’ny andro. Nisaraka ady sahala, 20 no ho 20 ny andaniny sy ny ankilany, tamin’izay. Tsy mbola fantatra kosa ny fotoana hamerenana izany lalao izany, fa miandry ny fivorian’ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny Malagasy Rugby. Raha tsiahivina, ady sahala 17 no ho 17 ny isa teny amin’ny solaitrabe, tao anatin’ny fe-potoana ara-dalana.